UKWAZI IPIRATE: UPHENGULULO LWEALBHAMU YEFLINTLOCK - IINDABA
Ngokunikwa umlenze nguRoc Marciano, umlobi oligqala ubuya kunye nokuthatha kwakhe iklasikhi yaselunxwemeni yasestratweni, esitratweni: iintsomi zeshishini elingenantlonelo elinikezelwa ngenzondelelo, kwaye zihlala zothusa inkcukacha.
Dlala iTrek Swashbuckling -Ulwazi ngePirateUkuhamba Ibhendi / Thenga
Ukuzibiza wena umgulukudu wokuqala ukudlwengula ii-Neptunes beats ibango elinenkalipho — kodwa yinto nje enye kumzi mveliso oqhayisa ngoLwazi iPirate eliqokelele ikhosi engaphantsi kwe-radar ebuyela kwiminyaka ye-1990. Umrepha, owahlula ixesha lakhe phakathi kweHarlem, ePhiladelphia, naseNew Jersey, waye wafunyanwa kuqala ngumlindi kaWill Smith, uCharlie Mack, kumlo we-rap. Wakhweliswa eHollywood ukuya kwindibano yeshishini leJack, apho wachukumisa khona uvulindlela omtsha uJack Teddy Riley watyikitya isivumelwano sexesha elifutshane neInterscope. Ulwazi luye lwaqhubela phambili ngokwenza isingqisho malunga nokubetha kwangoko ngu-Pharrell Williams kunye noChad Hugo ngaphambi kokuba iClipse ibe ngamakhwenkwe akhethiweyo eNeptunes. Waphinda wafaka iikhredithi zokubhala ghost kuWill Smith Uzalelwe uLawulo . Kuwo wonke umculo wakhe wokuhamba, uLwazi wagcina igama lakhe lesitalato, elamvumela ukuba kamva ziqhayise , Ndiyindoda yesitalato yangempela. Andiyonyani ngenene. Ndithathe intombi kaBiggie Smalls. Kodwa ngaphandle kokuba italente yakhe yaqatshelwa ngamagama anefuthe, uLwazi wakhula engenamonde kwaye wazihlukanisa nomculo wehlabathi.
Ngeli xesha lokuphumla, uLwazi wabetha ubuhlobo noRoc Marciano, owamcenga ukuba athathe imic kwakhona kwaye wamnika amabala eendwendwe kwii-albhamu zakhe. I-Roc ngoku ibekwe njenge-figurehead yohlobo oluhloniphekileyo lwe-hip-hop yase-East Coast eyahlula i-shadowy, i-backstreet vignettes ekhutshweni ngokuzolileyo, ukuveliswa kwesampula yomphefumlo, kwaye yile ngqungquthela yomculo we-thug-rap wexesha langoku Ulwazi loLwazi olude, I-Flintlock , uyongeza. URoc uphatha isahlulo sesithathu semisebenzi yokuvelisa ngokwakhe-kunye nokushiya ivesi yeendwendwe kwindawo yokubhiyozela, ephantse yonwabise i-Cant Get Enough-kwaye yonke enye iza ngoncedo lwenkampu ye-Elemnt kunye ne-Mushroom Jesus. Ngokudibeneyo, benza i-grainy, ngasemva egcwaliswe ngumphefumlo egcwalisa ukuthunyelwa kolwazi lwegrabile-oluvakaliswe kwilizwe lolwaphulo-mthetho.
Uhlobo lwesitayile sokwazisa sisitshixo ku I-Flintlock Isibheno. Ufana nentatheli ebethiweyo: Akukho gumbi kumagama akhe eengoma zokudlala ngokukhohlisa okanye ukungaqondakali, njengokuphinda nje ukubanda kwezibakala ezichaza iimeko ezimbi nezisoloko zikhohlakele. Ukuba uRoc Marciano ngoyena uthethayo othe cwaka egumbini, uLwazi ngoyena mntu ulumkisa ngokucacileyo wonke umntu ukuba kuya kwenzeka ntoni xa izinto zingahambi ngqo ekucwangcisweni. Kukho i-ellipsis yobundlobongela kwisandi esizinzileyo selizwi lakhe naxa engabhali zenzo ezithile zembuyekezo.
Inqaku ngapha: Iintsiba ezishwabeneyo zilaliswe ngumbethi we-Elemnt oxuba imigca yomzimba ene-sinewy kunye nokudanyaza kweekatala njengoko uLwazi ezazisa, Hambisa eyam esithoba ngelixa ndithatha le miyalelo. Uqhubeka nokuhambisa ingxelo yamva nje: Baninzi kakhulu abasweleke bequbha kula manzi / Bafumanise ukuba i-nigga phezolo, amalungu omzimba afakwe kwindawo yokugcina / Ngoku iqela lakhe limi ndawonye kwaye alilelanga / Bathe bakubona kwiindaba zokuba i-nigga ocebisa ngurhulumente. Ukuqhubela phambili, uLwazi luyalela iqela lakhe ukuba liqhubeke nokujonga ngasemva ngaphambi kokwenza ubudlelwane obutsha beshishini. Sisisombululo esisengqiqweni kwimeko ebalaseleyo.
Ukungabikho kweenqwelomoya ezihamba ngenqwelo moya kwizitampu ezintle I-Flintlock Ndiziva ndinyanisekile. Indlela ebekelwe bucala uLwazi ihambisa amabali ngemipu kunye nezinto ezingekho mthethweni-kwaye ibhekisa kwimikhwa yokuziphatha komdlalo oxakekileyo-yonyusa uxinzelelo. KwiBluesy Beers, Bullets & Bloodshed ubonisa iliso elibukhali lokuzoba imeko yolwaphulo-mthetho. Ukumisa umngxuma kwindawo yokutyhila kutyhila ukutyhila imusketeer ngaphaya imi kwizinyuko; imipu emincinci ehleli ngasemva kwebar ejija ivodka, sifunda ukuba, baceba ukubetha phandle bezinyikimisa izitulo. Ukuseta kwe-nervy kungatyhileki njengekhamera ecothayo ukukhanyisa imeko kwiinkcukacha ezothusayo. Esi sisandla esiqinileyo, esivuthiweyo esichaza ekugqibeleni I-Flintlock -Kwaye inika ithemba kwizinto ezinokubonwa ziiNeptunes kunye noTeddy Riley kuyo yonke loo minyaka idlulileyo.
U-dennis wilson pacific ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka
mtv vma bukhoma umlambo
inkosi keef iingoma ezintsha
Beanie sigel b. iyeza
chubby kunye neqela lemigulukudu
ubukumkani obubi ngokungathandabuzekiyo